Archive du 16-déc-2021
Ny tsy feno ihany no mihontsana
Ny zavatra tena sarotra indrindra ho an’ity Fanjakana mitantana an’i Madagasikara ankehitriny, dia ny fihaikena ny lesoka sy ny tsy fahaiza-mitantana.
Nanelingelina ny fiarahan’izy roa Notapahin-doha , avy eo notetitetehina ilay rangahy
Ny 09 desambra lasa teo no nahitana razana efa simba tanteraka, voatetitetika hitan'ny fokonolona tao Bemasoandro Kaominina Antsapandrano distrika Antanifotsy.
Analamanga, Vakinankaratra, MatsiatraAmbony Nohenjanina ireo fepetra ara-pahasalamana
Nambara tao anatin’ny filankevitry ny minisitra manokana momba ny fiatrehana ny raharaha ara-pahasalamana noho ny fivoaran’ny coronavirus, fah iditra anatin'ny "fahamailoana ara-pahasalamana" i Madagasikara.
Fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna Basy miisa 493 no nisy nanatitra an-tsitrapo
Basy 493 no natolotry ny Lehiben’ny Etamazaoron’ireo Tafika, ny Jeneraly Sahivelo Lala Monja Delphin, ny Fitaleavan’ ny Fanompoam-pirenena sy fiandry omaly 15 desambra teny Andohalo.
Mpanolontsaina ara-bola Tsy re feo intsony ilay fanafarana an-dry Rothschild
Tsy re feo mihitsy. Mampametra-panontaniana hoe nankaiza moa izany ilay kabinetrana mpanolontsaina ara-bola avy amin’ny Rothschild & Co efa natsidi-dresaka tan
Sojaben’ny fakiolten’ny Siansa “Vitsy ny siantifika anaty fitondrana”
Ny siansa no tokony hifotorana raha tiana handroso ny firenena, hoy ny sojaben’ny fakiolten’ny siansa eny anivon’ny oniversiten’Antananarivo, Dr Parker Ramahazosoa.
Florent Rakotoarisoa - Filohan’ny HCC “Toy ny baolina io, izay resy milaza fa miangatra ny mpitsara”
Naneho hevitra momba ny adihevitra samihafa mikasika ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) sy ny Vaomieram-pirenena momba ny fifidianana (CENI) ny Filohan’ny HCC Atoa Florent Rakotoarisoa omaly.
Loza mahatsiravina teny amin’ny RN1 Zandary 1, miaramila 1 sy ny vadiny maty tsy tra-drano
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray tany amin’ny làlam-pirenena voalohany miazo an’I Tsiroanomanididy iny.
Njara Marcel Hitondra hira Malagasy sy findraman-kira miavaka
Etsy amin’ny Havana Resort Ambohidahy no fotoana iarahana amin’ny tarika Njara Marcel ny alin’ny 31 desambra izao manomboka amin’ny 8 ora ho fiandrasana ny taona vaovao 2022.
Prof James Ratsima Nanakiana mafy an’i Paul Rabary
Tsy mazava amiko loatra, hoy ny mpanao politika, Prof James Ratsima, ny antony nitenenan’ny mpanabe namako, Paul Rabary, fa mbola ho lany ny filoham-pirenena amin’ny taona 2023.
Fitrandrahana ny seranam-piaramanidina vaovao Nahitsy ireo fifanarahana mamono antoka ny fanjakana
Vita omaly 15 desambra 2021 teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ihany ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny Fanjakana Malagasy sy ny Ravinala Airports izay ao anatin’ny Vondrona Meridiam,
Faha 60 taonan’ny fakiolten’ny Siansa Notolorana marim-pankasitrahana ireo nahavita be
Nifarana omaly teny Ankatso ny 3 andro fanamarihana amin’ny fomba siantifika ny faha 60 taonan’ny fakiolten’ny Siansa eny amin’ny oniversiten’Antananarivo.
Vaomiera nasionalin’ny nosy Malagasy “Hanaiky izao zava-miseho izao foana ve ny Malagasy ?”
Tsy hay ny tsy haneho hevitra manoloana ny tsy fanarahan’ny fitondrana misy ankehitriny ny lalàna velona sy ny zon’olombelona, hoy ny avy eo anivon’ny Vaomiera nasionalin’ny nosy Malagasy, omaly tetsy Ambondrona.
Antoko mpihira RFF sy Havana Resort Hanome sasakalin’ny noely hafa kely
Amin’ny herinandro isika dia efa hiatrika ny fetin’ny krismasy ary andro vitsy aorian’izay dia hiatrika ny famaranana ity taona 2021 ity,